Ogaden News Agency (ONA) – Cali Katiin ayaa ku sheegay inaad …!
Cali Katiin ayaa ku sheegay inaad …!
Caruurta ayaa waxaa lagu cabsiin jiray markuu gabalka dhoco in la yidhaahdo – war soo xaroo Cali Katiin ayaa banaanka taagane – sidaa darteed ayaa maahmaah lagala baxay odhanaysa – Caruurta iyo Cali Katiin waligood isma arkaan –.
Shacabka S.Ogadenya waxaa haysata hadda mid taa la mid ah. Waxaa haysata in qofkii la doono la soo xidho oon laba qof isweydiinin sababta loo soo xidhay iyo dambiga uu galay, sababtoo ah jawaab diyaarsan ayaa jirta oo la mid ah Cali Katiinkii caruurta dibadda u taagnaa oy ka cabsan jireen iyagoon waligoodba arkin.
Inuu gumaysiga dadka uu gumaysto qofkuu doono xidho ama dilo waa arin shucuubtii la soo gumaystay ay soo wada mareen, hasa ahaatee haduu shacabkaasi garan waayo in walaalkood dambiga lagu xidhay ama lagu dilay yahay mid isagana sugaya, ayaa masiibo ah iyo wacyi la’aan haysata shacabkaasi.
Tan iyo waagii maleesiyadii Ihaadhigta (Wayaanaha) ay ku qasbeen shacabkeena inay hubka qaataan say isaga difaacaan qooqii iyo kibirkii ku jiray markay ka qabsadeen xukunka ciidankii Mingisto oy jabiyeeen kacdoonkii Oromada iyo islaweyniddii Itixaadka, waxaa soo maray shacabka S.Ogadenya erey-bixino badan oo dambi looga dhigayo lagu xidho ama dilo. Dambiyadaasi waayadii hore waxay ahaayeen qofka lagu soo eedeeyo mid uu diidi karo oo dalban karo in lagu soo cadeeyo. Waxaa dhici jirtay isla markaaba in qaar la soo abaabulo oo la horkeeno qofkii eedaysanaha ahaa oo ku marqaati fura iyagoo waliba ku dhaaranya.
Muddo ayay arintaasi socotay. Ugu dambayntii waxaa soo baxay qaar shaqa ka dhigtay oo dadka ku baada ama kaga qayila kuwa raba inay qof soo xidhaan. Waxay noqotay markii dambe in kuwii dadka dambiyada ku soo oogi jiray iyagii qudhoodii lagu soo oogo, oo xataa wasiiradii ugu dhawaa Cabdi iley markay damceen inay qaar ku handadaan iyagii lagu marqaati furay inay la socdaan nabad-diidka.
Walina way jirtaa baahidii gumaysiga u qabay in dadka shacabka la dhibo, la dilo oo cabsida iyo argagixinta lagu badiyo oo shaki lakala qaadsiiyo. Falalkaasoo ah hubka uu kula dagaalamayo gumaysiga halganka gobanimadoon si loo hanjabiyo shacabka isla markaana loo kala ilaaliyo shacabka iyo Gobanimadoonka.
Maxaa lagu badalay arintii marqaati beenaalaha ahayd? Waxaa lagu badalay in la abuuro Cali Katiin aan waligiiba la arkaynin, hadana lagu khuukhiyo shacabka. Waa in la yidhaahdo Mid ka soo galay jabhadda ayaa ku sheegay. Oo waa kuma midkaasi? Markii hore waxay ku bilaabeen in qaar ka mid ah daba-qoodhiga ay iska dhigaan Naftiihure soo xarooday oo iyaga oo la dabasocdo ay ku farfiiqaan qofka la rabo, ama reeraha la rabo in la qabqabto. Haddase qofkii la soo xidho ama reerkii la gabagabeeyo waa un Mid ka soo galay jabhadda ayaa ku/idin sheegay. Midkaa soo galay oo ah Cali Katiin aan waligiiba loo baahnayn in la tuso qofka ama reerka eedeysanaha ah.
Shacabka waa inuu sidaa u ogaadaa oo aanu isku mashquulinin raadinta Cali Katiin iyo yaa i sheegay ama yaa soo galay oo na sheegay.